Ingqondo engenangqiqo yokukhathala
Yifutshane kangakanani inkcazo yokukhathala? Akunjalo ngamacala xa, emva komhla oxakekile kunye nobunzima, wena, uphonsa yonke imisebenzi yakho yasekhaya kunye nexhala, uhlale phantsi kwisihlalo sakho ozithandayo uze ucinge ngendlela efana ngayo ukuphumla kwindlu yakho epholileyo emva kwentsapho isidlo sakusihlwa. Le meko iyinto eqhelekileyo kunoma yimuphi umfazi waseRussia.
Kule nqaku siza kuqwalasela ezo ziganeko xa, xa usuka ekubhedeni, sele uvakalelwa kukuba unomsindo ongenalo isizathu, ingxaki engenangqiqo yokukhathala, iyahlukana ngokungaqhelekanga kwaye ayikhumbuli into ofunayo ukuyenza, uphazamiseka yingxolo kunye noxinzelelo, ucaphukisa i-squeak iingcango zomnyango okanye umnxeba, uziva uxhalabile kwaye uziva unomnqweno, ushiya yonke into, ukuba ubalekele kude. Ukuba uneemeko ezinjalo, qaphela - usemngciphekweni womgca onobungozi.
Ukuxilongwa kwalo mqathango kulula - awukhathazeki ngenxa yengqondo engenangqiqo yokukhathala, kodwa ngenxa yokusebenza ngamandla. Ukususa zonke izinto ezimbi zolu rhulumente, kufuneka uguqule ngokukhawuleza into ebomini bakho. Kubalulekile ukuba ngandlela-thile ulandelelanise kwaye utshintshe inkambo yobomi, mhlawumbi ukuyeka ukutshaya nokusela, ukuzithela ukuba uqale ukuthobela umgaqo wemihla ngemihla. Izenzo ezinjalo ziyakunceda ekubuyiseleni ibhalansi yeentsholongwane zakho, uncedo ekubuyiseni kwisigqi somsebenzi esivamile kwaye ujabulele ubomi kwakhona.
Imeko echazwe ngasentla kwimijikelezo yonyango ibizwa ngokuba yi-syndrome yesifo esingapheliyo. Namhlanje, isifo esiqhelekileyo kwaye, ngelishwa, kukuba kuninzi ngokuthe ngqo ukuba ngaba abameli besigqeba esihle sabantu abachaphazelekayo, kuba abafazi baninzi kunabesilisa, bebandezeleka kakhulu. Isizathu salo sisona sikhathele, kunomntu, inkqubo yeentlanzi kunye neendlela ezincinci ze-hormonal. Ukongezelela, abafazi bahlala rhoqo emagxeni omsebenzi omkhulu wendlu. Kwimeko apho, ngexesha elifanayo, isimo esingasimpilo ekhaya kunye neengxabano ezenzeka kwindlu, imeko ihlaziywa ngokuphindaphindiweyo.
Cinga ngamabhinqa ahlukeneyo kwaye uzame ukufumanisa ukuba indlela abaphila ngayo ichaphazela njani ukukhathala. Abendlu bezindlu basebenza kuphela emsebenzini weencwadi, basebenzisa amandla amaninzi ekucoceni indlu, ukupheka, ukuhlamba, ukuthenga izinto zokutya, ukunyamekela abantwana. Ngokuqhelekileyo imeko ilukhuni ngokungabi nandiphako kumsebenzi owenziweyo, njengoko yonke imisebenzi yasekhaya ibonwa njengezihlobo njengento enyanzelisayo. Kwaye ukuba uyayiva le binzana: uyintoni ukhathele? Awusebenzi! Imvakalelo iya kupheliswa.
Kodwa imeko ayilula kubasetyhini abasebenzayo besini esibuthakathaka. Eli nqanaba labasetyhini ligqitha umzuzu wakhe ngomzuzu kwaye usenako ukukhawuleza kwindawo ethile-ukuya kwibhasi, kwimitha, emsebenzini. Ngexesha lesidlo, baya kudla ngokukhawuleza, emva komsebenzi baphuthuma kwiivenkile ukuthenga ukutya, baphuthuke ekhaya ukuze banike ingqwalasela ebalulekileyo kubantwana kunye neqabane. Zama okungenani ngokuthe ngcembe kwenzeni imisebenzi yasemakhaya, eqokelela kwaye kufuneka, ukuba ingabuthongo ngokufanelekileyo, ukuba idibanise nabo ngeveki. Ubani onokwenzeka?
Kuthiwani ukuba unesiva esingenangqiqo sokukhathala? Izizathu eziqhelekileyo zokukhathala ziyaneliseki, zidibanisa ngokwazo kunye nendlu, okanye abanye abantu abasondelene nawe. Kubalulekile ukuqonda oko kukuthintela ulonwabo kwaye xa kunokwenzeka ukususa ezi zinto ezimbi ebomini bakho - zama ukulungisa iingxabano zasekhaya, utshintshe imisebenzi. Uya kubona, oku kuza kuzisa umphumo ofunwayo.
Indlela yokuhlala enhle emva kobuhle bemfihlo ka-45: 4 uJennifer Lopez uza kunceda ukukopela ixesha!
Izindlela zokuphucula kunye neendlela ezintsha
Kuthiwani ukuba akukho ubisi ngokwaneleyo?
Ukuphulukisa iipropati ze-koumiss
Phenol Face Peeling
I-Potato soufflé ngeeshizi
Oomama abatsha nabantwana abasandul 'ukuzalwa
Indlela yokwenza umntu akhathalele wena
Amakheke nge tshokiti kunye ne-caramel
Ungayigcina njani imveliso ngokuchanekileyo?
Igazi lilungu eliphambili
I-Risotto kunye ne-bacon nama-apula